Momba anay - Zhaoxian Tengxing Plastic Fashion Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 1991, Tengxing Plastic Fashion Group dia mpanamboatra matihanina ampiarahina amin'ireo orinasam-barotra anatiny sy iraisampirenena miompana amin'ny vokatra plastika sy zazakely. Ny foiben-toeranay dia miorina eo akaikin'ny tetezana Zhaozhou tsara tarehy, lova manan-tantara sy ara-kolontsaina fanta-daza any Shina, 300km any Beijing, renivohitr'i Shina, manodidina ny 280km mankany Xingang, seranan-tsambo lehibe indrindra any avaratr'i Shina no misy azy. ny toe-javatra nifanelanelana teo amin'ny vondrona Tengxing sy izao tontolo izao. Misy orinasa mpamokatra indostrialy telo an'ny renim-pianakaviana. Izy ireo dia toy ny Zhaoxian Plastic Factory, Ningjing Plastic Film Factory ary Pingquan Yadong Plastic Fashion Co., Ltd .. Nanangana birao any Guangzhou, Yiwu sy Shijiazhuang ihany koa izahay, izay manitatra ny fahafaha-manao tsara indrindra sy ny serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa rehetra avy ao an-trano ary malalaka.
Tengxing Group dia mihevitra ny fitantanana kalitao ho toy ny làlan'aina ary manome lanja lehibe azy io. Izahay dia voamarina amin'ny alàlan'ny CE, ISO fanamarinana, mandalo ny fitsapana fanaraha-maso manara-penitra eropeana ho SGS sy EN71, izay mampiseho tsara ny kalitaon'ny vokatra mifanaraka tanteraka amin'ny masontsivana fanondranana eropeana. Ny foto-kevitry ny serivisy fanatsarana sy ny fifehezana ny vokatra faran'izay tsara dia nandresy an'i Tengxing ny laza malaza sy manerantany. Ny vokatray dia mandeha amin'ny firenena maro toy ny any amin'ny faritra atsimo atsinanan'i Azia, Afovoany Atsinanana, Afrika, Eoropa ary Amerika. Ny olona mifototra ary miorina amin'ny fahamendrehana dia ny foto-kevitra ijoroantsika mandrakizay. Tengxing, ilay kintan'ny fandrosoana miroborobo dia te hiara-hiasa amin'ny mpanjifa rehetra, antitra sy vaovao, trano sy malalaka, hamorona ny rahampitso mandroso sy mandroso kokoa!
Karazan'orinasa:Mpanamboatra, Orinasa mpivarotra
Product Range: lamba tsy lena
Products / Service:Raincoat, Rain Poncho, Rain Hood, PVC Film, Baby Mosquito Net, Baby Diapers
Mpiasa tanteraka:51 ~ 100
Renivohitra (US $ tapitrisa):1000000rmb
taratasy fanamarinana:GS, CE
Adiresin'ny orinasa:368 Youyi North Street, Shijiazhuang, Hebei, Sina
Salanisan'ny fotoana itarihana: Fotoana fitarihan-taona: 0
Fotoana tsy itarihan'ny vanim-potoana: 0
Volan'ny varotra fanao isan-taona (tapitrisa US $): Ambony 100 tapitrisa dolara amerikana
Volan'ny fividianana isan-taona (tapitrisa $ US): ambany US $ 1 tapitrisa
Export isan-jato: 91% - 100%
Markets lehibe: Afrika, Amerika, Azia, Eropa, Moyen Orient, Eoropa Avaratra, Oseania, tsena hafa, Eropa Andrefana, Manerantany, Eoropa Atsinanana
Laharana famokarana: 5
No. ny mpiasa ao amin'ny QC: olona 5 -10
Haben'ny orinasa (Sq.meters): 3 000-5,000 Metre toradroa
Toerana misy ny orinasa: Faritanin'i Hebei